नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन १२, २०७६, २१:१६
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं साधारणसभा आगामी चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। महासंघको नेतृत्व चयनसमेत गर्ने साधारणसभा भएकाले व्यवसायीबीच चुनावी सरगर्मी सुरु भइसकेको छ।
महासंघको विधानअनुसार चैत २९ पछि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै ३ वर्ष पछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको चुनावलाई बढी चासोका साथ हेरिन्छ।
५४औं साधारणसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायी किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। महासंघको चुनावी रणनीति र भावी योजनाका विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधानसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
महासंघको ५४औं साधारणसभा तपाईंले पुनः दोस्रो पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन?
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मैले उम्मेदवारी दिनुका धेरै कारण छन्। एउटा कारण मैले २८ वर्ष महासंघ गरेको योगदान पनि हो। मैले दुई पटकसम्म जिल्ला-नगरमा उपाध्यक्ष भएर गरेको काम र सेवा नै सबै भन्दा ठूलो विषय हो।
यीबाहेक पनि देशभित्रै रहेका स–सना व्यवसायीदेखि ठूला घरानाका व्यावसायीका स-सना समस्यादेखि ठूलासम्म समस्या समाधान गर्नमा मेरो पहल हुनेछ। ठूला-ठूला समस्या समाधानका लागि सरकारसँग कसरी पहल गर्न सकिन्छ र मझौला उद्योगी व्यवसायीका सम्पूर्ण विषय कसरी प्रस्तुति गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ।
अर्को विषय भनेको चैत २९ गतेबाट स्वतः अध्यक्ष भएर आउनुहुने अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने पनि हो। योसँगै उहाँले लिनुभएका नीति कार्यान्वयनमा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रदेखि नेपाल सरकारसहित, महासंघका जिल्ला-नगर, एसोसिएट र वस्तुगत क्षेत्रका साथीहरूको सहकार्यका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। यसैगरी, राज्य लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्दै अध्यक्षज्यूको कार्यकाल सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने नै मेरो लक्ष्य हो।
योसँगै महासंघको छविमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै महासंघको छवि उच्च गर्न मैले गोल्छासँग सहकार्य गर्न लागेको हुँ।
उम्मेदवारीका दिन मलाई सम्रग देशभरका ठूला तथा साना र मझौला, एसोसिएट, वस्तुगत र जिल्ला-नगरका साथीहरूको दबाब थियो। उनीहरूले मलाई 'तपाईंले नेतृत्व लिनुपर्छ, तपाईंको आवश्यकता महासंघमा छ' भनेपछि मैले उहाँहरूकै आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उम्मेदवारी दिएको हो।
आज जिल्लाहरूले मलाई किन पूर्ण समर्थन गरेका छन्? जिल्ला-नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका साथीहरूले किन समर्थन गर्ने अवस्था आएको छ? यसको एउटै कारण हो, हामीले उठाएको समस्या व्यवसायीका पक्षमा छन् भन्ने हो। उदाहरणका लागि बैंकको ब्यजादर र करलगायतका विषयलाई लिन सकिन्छ।
बैकिङ क्षेत्रका समस्यामा जुन ब्याजदरको कुरा छ, यसका लागि हामीले सधै सरकारसँग सहकार्य गरिरहकेका छौं र लडिरहेका पनि छौं। यहाँ अहिले नेपालकै ठूलो बैंकको अध्यक्षले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। के उहाँ आएपछि हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ? उहाँले व्यक्तिगत समस्या त समाधान गर्नुहोला। यो विषयमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम माहाकालीसम्मका सबै जिल्ला-नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारण मेरो अनिवार्यता कसको लागि हो भन्दै गर्दा, सबै व्यवसायीका लागि हो। कुनै एक व्यक्ति र संस्थाका लागि मात्र कदापि होइन, हुँदैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नै गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलबाट सुरु गरौं न त। किन व्यवसायीबाट सुरु गर्ने। एक रुपैयाँ नभएको राजनीति दलका नेताले अर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट जोडे त्यो खोज्नु पर्दैन?
उहाँ एकछिनका लागि निर्वाचित हुनुभयो भनेर सोचेर हरौं त। उहाँले कसैका लागि समय दिन सक्नुहुन्न। यो मेरो ठोकुवा हो। महासंघलाई समय दिन नसक्ने, अध्यक्षलाई सघाउन नसक्ने व्यक्तिबाट हामीले कसरी आशा गर्न सक्छौं? उहाँले साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायीको पिरमर्का बुझ्न सक्नुहुन्छ? व्यवसायीकै समस्या/पिरमर्का बुझ्न र उनीहरुको सेवाका लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो। साथै यो उम्मेदवारी व्यवसायीहरूको हितका लागि हो।
महासंघको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चुनावी कार्यक्रम २८ गतेबाट सुरु भएर २९ गते बेलुकासम्ममा सम्पन्न हुन्छ। त्यसबेलासम्म हामी जे-जसरी निर्वाचनमा लागेपनि त्यसपछि फेरि हामी सबै एकजुट हुन्छौं। हामी निर्वाचन अगाडिका सबै कुरा भुल्छौं। सबै मिलेर नै अगाडि बढ्छौं।
बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्मान र हकहितको रक्षा गर्ने प्रण नै हाम्रो पहिलो सुदृढीकरणको अभियान हो। उद्योगी/व्यवसायी र लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल उठाउने हाम्रो अभियान हो। संगठन सुदृढीकरण यसमा पर्छ।
हामी सबै कसरी मिलेर जाने भन्ने नै हाम्रो अर्को एजेन्डा हो। हामी सबैको साझा एजेन्डा व्यवसायिक विषय नै हो। हामी किन छुटिएर जाने? मैले सबैसँगै के अनुरोध गरेको छु भने हामी एजेन्डागत रूपमा सरकारका जाँदा मिलेर जाऔं। सरकारसँग हाम्रै एजेन्डालाई एक जुट भएर राखौं र सहकार्य गरेर एजेन्डा पूरा गरेर आऔं। अर्कों कुरा हाम्रो सचिवालयको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो ३ वर्षमा नै ३ वटा महानिर्देशक परिर्वतन भएको छन्।
महासंघको छविमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै महासंघको छवि उच्च गर्न मैले गोल्छासँग सहकार्य गर्न लागेको हुँ।
यसको अर्थ पनि व्यक्तिको पराकाष्ठाका कारण हाम्रो सचिवालय चल्न सकेन। यसलाई पनि सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। संस्थाको सुदृढीकरणका लागि पनि हामी पहल गछौं र महासंघको शिर उच्च पार्ने काम हामी अवश्य गर्नेछौं। यो सँगै महासंघको आर्थिक उन्नतिमा हाम्रो विशेष ध्यान हुनेछ। उदाहरणका लागि हामीले प्रदेशको हकमा बजेट बढाउने सकेका छैनौं । यो पनि गर्न आवश्यक छ।
यो अति नै ठूलो प्रश्न हो। आज आम व्यवसायीले महासंघलाई एउटै व्यक्तिको पञ्जाबाट मुक्त गर्ने बाटो खोजिरहेका छन्। अवश्य पनि, यो पटकको नेतृत्व चयनबाट महासंघ एउटै व्यक्तिको गोटी बन्ने प्रवृत्ति भंग हुन्छ। यही परिर्वतनका लागि हाम्रो टिम हो। हाम्रो परिर्वतनको रूपरेखा भनेको नै भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ल्याएको योजना हो। उहाँले प्रष्ट रूपमा विराटनगरबाट भनिसक्नु भएको छ।
हामी कसैको रबरस्टाम्प भएर महासंघको नेतृत्वमा बस्दैनौं। जब हाम्रो अध्यक्ष सशक्त र सबल भएपछि त्यो अध्यक्षलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर उहाँको सशक्तता झन् बलियो बनाउन हामी सबैको प्रयास हुन्छ। हामी त्यही प्रयासका लागि काम गर्छौं। अहिलेसम्म पनि महासंघमा कसैको रबरस्टाम्प भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने आभास थियो। जनता तथा व्यवासायीलाई के आभास थियो भने 'विगतका अध्यक्षहरू रबरस्टाम्प हुन् कि?' भन्ने थियो। अब त्यो आभास हुन दिँदैनौं। हाम्रा अध्यक्षहरू कसैको पनि रबरस्टाम्प थिएनन् होला। तर, आम जनताका नजरमा अवश्य पनि थिए। त्यो आभास पनि दूर गर्छु भनेर हाम्रो भावी अध्यक्ष गोल्छाले भनिसक्नुभएको छ।
हामीले विगतका तिता अनुभवलाई लिएर राम्रो बनाउने प्रयास गर्ने हो। भावी अध्यक्ष गोल्छाज्यूले प्रष्टरूपमा भनिसक्नु भएको छ। प्रत्येक ३/३ महिनामा महासंघको वेबसाइटमा आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक गर्छौं, ताकि महासंघका गतिविधि सबैले हेर्न पाउन्। आज जनताले पनि हामी कहाँनिर गलत छौं, कहाँ सुधारको आवश्यक छ, कहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना छ, कहाँ छैन, कहाँ भइरहेको छ, ती सबै विषयको पारदर्शितालाई नै ३/३ महिनामा हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्छु भन्नु भएको हो।
गोल्छाजीको टिमबाट एसोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योती हुनुहुन्छ उहाँको पनि सहयोग पाउने पूर्ण आशामा छु। यसैगरी हाम्रै टीमबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला-नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठको पनि पूर्ण सहयोग हुनेमा विश्वस्त छु। यसरी सबै अनुभवी व्यक्तित्व र खारिएका व्यक्तिहरू हामीसँग हुनु हुन्छ। उहाँहरूको सहयोग पाउनु भनेको २८ वर्षको मेरो उद्योग वाणिज्य महासंघमा विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा बसेर राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने प्रमाण पनि हो।
जिल्ला भ्रमणका क्रममा तपाईंको पक्षमा कस्तो माहोल देख्नु भयो त?
मेरो माहोल दिनहुँ बढिरहेकै छ। जिल्लाले पनि दुई वटा कुरा चाहेको छ। एउटा एसोसिएटकै व्यवसायी अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। फेरि आज मेरो प्रतिस्पर्धी पनि एसोसिएटकै हुनुहुन्छ। ५० प्रतिशत मतभार रहेको जिल्लालाई अवहेलना भयो कि भएन? दुई वटै पद एसोसिएटले पाउनु न्यायपूर्ण हुँदैन भनेर मलाई जिल्लाका साथीहरूले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु भनेका छन्। हिजोसम्म मैले ५८ प्रतिशत भोट ल्याएर चुनाव जित्ने आँकलन गरेको थिएँ। तर, यो त परिर्वतन भइसकेको रहेछ। जिल्ला, वस्तुगत र एसोसिएटका साथिहरूको माया बढेको देख्दा त अब ७५ प्रतिशत भोट ल्याएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचन जित्छु भन्ने आधार तय भएको छ।
मेरो प्रतिस्पर्धी चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघका लागि समय दिन सक्नु हुन्न। उहाँलाई काम परेको छ भने फोन उठाउनु होला। तर, म साथीहरूसँगै नै समय लिएर भेट्न जान्छु, मसँग व्यवसायीले भेट्न समय माग्नु पर्दैन।
जिल्लाका साथीहरूलाई के थाहा छ भने मेरो प्रतिस्पर्धी चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघका लागि समय दिन सक्नु हुन्न। उहाँलाई काम परेको छ भने फोन उठाउनु होला। तर, म साथीहरूसँगै नै समय लिएर भेट्न जान्छु, मसँग व्यवसायीले भेट्न समय माग्नु पर्दैन। मेरो इतिहास के छ भने १ बजे राती भएपनि व्यवसायी साथीहरूको फोन उठाएर उहाँहरूको समस्या सुन्ने गरेको छु। म त जिल्ला-नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका साथीहरूसँग समय लिएर भेट्न जान्छु तर, मेरो प्रतिस्पर्धीलाई भेट्न त व्यवसायीले नै समय लिनुपर्छ। सम्मान, दृष्टिकोण र प्रेरणा मैलै बलियो रूपमा पाएको छु। मलाई अहिले आएको उत्साहको पछाडि साथीहरूको सहयोग नै हो।
सरकारको एउटा अंग अहिले व्यवसायीका सम्पत्तिमा आँखा गाडेर बसेको छ भनेर व्यवसायीहरू दुखेसो पोख्न थालेका छन्। महासंघको आगामी नेतृत्वले व्यवसायीलाई कसरी सुरक्षा दिन सक्छ?
अहिले व्यवसायी वर्गमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पेचिलो बनेको छ। व्यवसायीको आम्दानीमाथि आँखा लगाउने काम अवश्य भएको छ। तर, आतंक भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीज्यूबाट आउने अभिव्यक्तिले केही राहत भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सम्पत्तिको घोषणा त अवश्य पनि चाहिन्छ। सरकारले एकपटक सबै व्यवसायीलाई सम्पत्ति घोषणा गर्ने एउटा मौका दिनुपर्छ। त्यो मौकामा जो चुक्छ, त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्थामा सरकार लाग्नुपर्छ। सम्पत्ति घोषणा गर्ने अधिकार नदिएर सबै लाई चिट्ठी पठाउने, अडिटका कागजपत्र माग्नु ठिक होइन। माग्नु नै छ भने करबाट मागे भइगो नि! हामीले दिएकै छौं त।
५० वटा संस्थाले हामीसँग माग्नु पर्ने कारण के? सरकारलाई त थाहा छ, हामी व्यवसायीले कहाँकहाँ विवरण बुझाउँछौं भन्ने विषय। त्यो गलत प्रक्रिया अहिले सुरु भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नै गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलबाट सुरु गरौं न त। किन व्यवसायीबाट सुरु गर्ने। एक रुपैयाँ नभएको राजनीति दलका नेताले अर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट जोडे त्यो खोज्नु पर्दैन? अनि दिन रात दुःख गरेर कमाएको सम्पत्तिको शुद्धीकरण उहाँहरूलाई तुरुन्तै किन चाहिँयो? हामी गर्छौं तर, पहिले नेता तथा वरिष्ठ कर्मचारीबाट सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढने प्रतिबद्धता गर्दछु।